မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ (အမ်သရီးဖုစင်တာ - ရန်ကုန်) | Geographical Association of Myanmar
What is GAM
၂၆ - ၄ - ၂ဝ၁၅ အထိ ရာသက်ပန်အသင်းဝင်များနှင့်သာမန်အသင်းဝင်များ
Directives for IGU
မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ (အမ်သရီးဖုစင်တာ - ရန်ကုန်)
ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်အေး၏ လက်ရွေးစင်စာစုများ
(Geographical Association of Myanmar: GAM)
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်(တနင်္ဂနွေ)နေ့ ၊ မွန်းလွဲ (၁းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် (M-3 Food Centre)၊ ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော "GAM နှင့် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့များ မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပွဲ " အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားမည့် မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်အေး၏ အဖွင့်အမှာစကား။
ယနေ့အခန်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး (GAM) ရဲ့  နာယကများ၊ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများ ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (ယာယီ) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ၊အသင်းဝင်များ ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေလို့ ဦးစွာပဏာမ ကြိုဆိုနုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
ပညာရပ်အပေါ်မှာအခြေပြု ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းဖြစ်လ်ို့ ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကစ၍ အကျဉ်းသဘောမျှ ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ ပထဝီဝင်ပညာဆိုသည်မှာ " တိုက်ကြီးများ ၊ ပင်လယ် ၊ သမုဒ္ဒရာများ ၊ တောင်ကုန်း ၊ တောင်တန်းများ၊ မြစ်ချောင်း ၊ အင်းအိုင်များ ၊နိုင်ငံ ၊ မြို့ ရွာများ၏ အမည်နှင့် တည်နေရာကို အလွတ်ကျက်မှတ်ရတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ " အချို့ လူများကထင်မြင်ယူဆကြတယ် ။ ဤယူဆချက်မှာ ပထဝီဝင်ပညာ၏ ကကြီးခခွေးအဆင့်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်တွင် ပထဝီဝင်ပညာ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီး ဘောင်ခတ်ဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့ အထိ ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။ ပထဝီဝင်ပညာ၏ ဘာသာစိတ်အသစ်များ(ဝါ) နယ်ပယ်အသစ်များလည်း ပေါ်ပေါက်လာဆဲဖြစ်ပါသည်။ (ပထဝီဝင်= ပထဝီ + ဝံသ) (မြေကြီး + ဆက်နွယ်မှု)
ပထဝီဝင်ပညာရပ်၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ " ကျွန်ုပ်တို့လူသားအားလုံးနေထိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာဂြိုလ်(ဝါ) ကမ္ဘာရွာအကြောင်းကို နားလည် သဘောပေါက်အောင် စနစ်တကျလေ့လာသည့်ပညာရပ် " ဖြစ်သည်။
" ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရာဒေသကိုလိုက်၍ ကွဲပြားခြားနားစွာ ပျံ့ နှံ့တည်ရှိနေကြသောအချင်းအရာများ ၊ အကြောင်းအရာများ ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့် ယင်းတို့၏ အဆင်ပုံစံများ ( Patterns) ကိုလည်းကောင်း ၊ အဆိုပါအဆင်ပုံစံများကို ဖန်းတီးပြုပြင် ပုံသွင်းပေးနေသောဖြစ်စဉ်များ( Processes)ကို လည်းကောင်း စနစ်တကျ စူးစမ်းလေ့လာ ရှင်းလင်းတင်ပြသော သိပ္ပံပညာရပ် " ဖြစ်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် အနက်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ပထဝီဝင်ပညာသည် ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အရာခပ်သိမ်းကို ပြုပြင်ပုံသွင်းပေးနေသော ရူပ ၊ ဇီဝ ၊လူမှု - စီးပွားဖြစ်စဉ်များကိုလည်းကောင်း ၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များနှင့် လူတို့သည် မည်သို့မည်ပုံ အပြန်အလှန် ပြုပြင်ဆက်နွယ်နေမှုကိုလည်းကောင်း စနစ်တကျ စူးစမ်းလေ့လာ ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်သည့် ပညာရပ်ဖြစ်သောကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလွန်အဖိုးတန်သော ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
ပထဝီဝင်ပညာသည် ပညာရပ်၏သဘောသဘာဝအရ ဝိဇ္ဇာတစ်ပိုင်း ၊သိပ္ပံတစ်ပိုင်းပညာရပ် ဖြစ်နေပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချို့  နိုင်ငံ ၊ အချို့ တက္ကသိုလ် များတွင် ပထဝီဝင်ပညာကို ဝိဇ္ဇာဘာသာဟုသတ်မှတ်ပြီး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ပေးသည်။ အချို့ နိုင်ငံ ၊ အချို့ တက္ကသိုလ်များတွင် သိပ္ပံဘာသာဟု သတ်မှတ်ပြီး သိပ္ပံဘွဲ့ပေးသည်။ သို့သော် ပထဝီဝင်ပညာကို ဝိဇ္ဇာဘာသာရော ၊ သိပ္ပံဘာသာပါ နှစ်မျုိုးစလုံးသတ်မှတ်သော နိုင်ငံနှင့် တက္ကသိုလ်များလည်း ရှိကြပါသည်။ မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင်မူ ပထဝီဝင်ပညာရပ်ကို ဝိဇ္ဇာဘာဘာရပ် တစ်ခုအဖြစ်အစဉ်တစိုက်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုသာပေးပါသည်။ ပညာရပ်၏ သဘောသဘာဝကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ပြီး ပထဝီဝင်ပညာရပ်ကို (Social Science) လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ် (ဝိဇ္ဇာ)အနေနှင့်လည်းကောင်း ၊ (Natural Science )သဘာဝသိပ္ပံဘာသာရပ် (သိပ္ပံ) အနေနှင့်လည်းကောင်း နှစ်မျိုးစလုံးကို သတ်မှတ်၍ သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဆိုလျင် ယခုထက်ပိုမို ထိရောက်မှုရှိနိုင်မည် ၊ အကျုိုးကျေးဇူးပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပါသည်။
ပထဝီဝင်ပညာက်ို ( Regional Science , Regional Analysis , Environment Studies , World Studies , Planetology) စသောအမည်များဖြင့် အစားထိုးမှည့်ခေါ်ဖို့ အချို့ က ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြဖူးသည်။ သို့သော် ယင်းအမည်များသည် မူလအမည်ဖြစ်သော ပထဝီဝင်ပညာ(Geography) ၏ ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံနိုင်မှုကို မကျော်လွှားနိုင်ချေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ယင်းအမည်များ၏ အဓိပ္ပါယ်အသီးသီးတို့သည် ပထဝီဝင်ပညာ (Geography) ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ထီးကြီးအောက်တွင်သာကျရောက်စုစည်းတည်ရှိနေပေသည်။
' ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တစ်ဦးအဖို့ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိသညာများ ၊ ဗဟုသုတများ ၊ ကျွ မ်းကျင်မှုများ ၊ သဘောထား အယူအဆများကိုသာ မရရှိနိုင်ခဲ့ပါက ၎င်းလူငယ်၏ ပညာရေးမှာ မှေးမိန်အားနည်းနေလိမ့်မည်ဟု ' မကြာသေးမီက ယူကေနိုင်ငံမှ ပညာရေးဝန်ကြီးတစ်ဦးက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါသည်။ (A Child 's education is diminished withoutasound knowledge of Geography. )
ပထဝီဝင်ပညာကို သင်ယူဆည်းပူးရာတွင် အစဉ်အလာအားဖြင့် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာ စူးစမ်းမှုများကို မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ရသည်။ ခရီးတ်ို ၊ ခရီးရှည် ထွက်ရသည်။ ပထဝီဝင်ပညာက ခရီးသွားချင်စိတ်ရှိအောင်နှင့်် ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာ ခရီးသွားတက်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များတွင်လည်း ( Geography Channel , World Studies Channel ) စသောအစီအစဉ်များကို သီးသန့် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့် ပြသနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
သမိ်ုင်းနောက်ခံ (အကျ ဉ်း )
ပထဝီဝင်ပညာသည် ယခုခေတ်မှသာပေါ်ပေါက်လာသော ရွှေကြာပင်ဘာသာရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ သမိုင်း ၊ ဒဿ နိကဗေဒ ၊ နက္ခတ္တပညာနှင့် သချာင်္ဘာသာများကဲ့သို့ လွန်ခဲ့သောရှေးနှစ်ပေါင်း ၂၅ဝဝ ခန့်ကတည်းကပင် စောစီးစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဝါရင့် ၊ သမ္ဘာရင့် ဘာသာရပ်ကြီး တစ်ခုဖြစ် သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံးအနောက်တိုင်းပုံစံဖြင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိ်ု ဥရောပတိုက်တောင်ပိုင်း ၊ အီတလီနိုင်ငံ ၊ ဘိုလော့ညာမြို့  ( Bologna) တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၇ဝ ခုနှစ်တွင် ပထဝီဝင်ပညာကို တက္ကသိုလ်ပညာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဥရောပတိုက်ရှိ ဂျာမန်စကားပြောသောနိုင်ငံများတွင် စတင်သင်ကြားပို့ချ ခဲ့ကြပြီး သီးခြားပထဝီဝင်ဌာနများလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ အဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၂ဝ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဌာနကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့် သက္ကရာဇ် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏သက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာရှိမည်ဖြစ်ပြီး " ရာပြည့်မွေးနေ့" အခမ်းအနားကို ကျင်းပဆင်နွဲနိုင်တော့မည်ဖြစ်သလို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဌာန တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာလည်း ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်တွင် နှစ်တစ်ရာတိုင်တော့ မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် ပထဝီဝင်ပညာဌာနတို့၏ ရာပြည့်မွေးနေ့များ ကို ကြိုဆိုပါသည်။
၁၉ရာစုအစောပိုင်းမှစတင်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ။ နာမည်ကျော် တော်ဝင်ပထဝီဝင်အသင်း ( Royal Geographic Society - RGS) သည် ၁၈၃ဝ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ ဗြိတိသျှ ပထဝီဝင်ပညာရှင်များအသင်း ( Institute of British Geographers - IBG) သည် ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်ပထဝီဝင်ပညာရှင်များအသင်း (Association of American Geographers -AAG) သည် ၁၉ဝ၃ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံတကာပထဝီဝင်သမဂ္ဂ ( International Geographical Union - IGU ) သည် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း အသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပထဝီဝင်အသင်းအဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့တွင် ကြီးစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်ရာစုခေတ်သို့ရောက်သောအခါ ဗြိတိ်န်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိင်ငံတို့ရှိ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့တွင် ပထဝီဝင်ဌာနများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်း [ A Non- Governmental/ Political/ Religious / Profitable Organization]
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး (GAM) ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်မှာ ယခုမှမဟုတ်ပါ ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်လေးဆယ်ခန့် ကတည်းကပင်ဖြစ် ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ခန့်က တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်များအလယ်လောက်ခန့်က တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ် ၊ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်ဆန်းပိုင်း တွင် တစ်ကြိမ် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြဖူးပါသည်။ သို့သော် ထိုခေတ်၊ထိုအခါက အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းများကြောင့် အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါ။ ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက် ၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့်လျှောက်လွှာကို ထပ်မံတင်သွင်းခဲ့ပါ သည်။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီး တစ်နှစ်ခွဲခန့်အကြာ ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခွင့်လက်မှတ် (အမှတ်- ၂၁၃၉) ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရေးနှင့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပထဝီဝင်အသင်းကြီး (GAM) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျ ဉ်း[Constitution]
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး (GAM) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျ ဉ်းတွင် စာမျက်နှာ (၂၁)မျက်နှာနှင့် အခန်းပေါင်း (၁၁) ခန်းပါဝင်သည်။
၁။ အသင်း၏အမည် ၊ အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ် နှင့်် တည်ရာဌာန [ Name , Seal & Address]
၂။ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်း [Objectives & Functions]
၃။ စီမံခန့်ခွဲခြင်း [Management]
၄။ အသင်းဝင်ဖြစ်နိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက် [Requirements for Membership]
၅။ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်း [Formation]
၆။ ရွေးချယ်တင်မြောက်မှုအရည်အချင်း ၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ [Responsibilities & Right]
၇။ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ [Responsibilities & Right]
၈။ အစည်းအဝေးများ [Meetings]
၉။ အသင်းဝင်များ၏ တာဝန်များနှင့် အကျုိုးခံစားခွင့်များ [Responsibilities & Benefits]
၁ဝ။ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း [Dismissal]
၁၁။ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျ ဉ်းပြင်ဆင်ခွင့် [Amendment]
အသင်း၏အမည်ကို မူလမှတ်ပုံတင်စဉ်က မြန်မာနိ်ုင်ငံပထဝီဝင်အသင်း ဟုတင်ပြခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲတွင် မည်သည့်အသင်း အဖွဲ့မျှ မြန်မာနိုင်ငံ ဟူသောစကားလုံးကို သုံးစွဲခွင့်မပြုဟု သက်ဆိုင်ရာမှ အကြောင်းကြားလာသဖြင့်မြန်မာန်ိုင်ငံပထဝီဝင်အသင်း အစား မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်း ဟု ပြောင်းလဲလက်ခံခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အမည်မှာ မူလမှတ်ပုံတင်စဉ်က တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ( Geographical Association of Myanmar -GAM)ဟု ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး(GAM)၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
(က) ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပထဝီဝင်ပညာဖြင့် အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဂ) ပြည်သူလူထုအတွင်း ပထဝီဝင်အသိသညာများ(Geographic Concepts) တိုးတက်ပျံ့ ပွားစေရန်
(ဃ) အသင်းသူ အသင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီး ၊ယိုင်းပင်းကူညီမှုရှိစေရန်၊
(င) နိုင်ငံတကာပထဝီဝင်သမဂ္ဂ (International Geographical Union -IGU) အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပထဝီဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ချစ်
ကြည်ရင်းနှီးရေး ၊အပြန်အလှန်အကျိုးပြုရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး(GAM) ၏ လုပ်ငန်းများ
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်း (GAM) က ရှေ့တွင်ဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းများမှာ-
(က) အခါအားလျော်စွာ ပထဝီဝင်ပညာနှီးနှောပွဲများ ၊ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများ ၊သင်တန်းများ ကျင်းပပြု လုပ်
( ခ ) အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆက်နွယ်သမျှသော အကြောင်းအရာများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ၊ ယင်းအတွက် သုတေသနစာတမ်းများအား မှတ်
တမ်းတင်ထားသော ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး (၂) ကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်း၊
( ဂ ) အများပြည်သူနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပထဝီဝင်ပညာဗဟုသုတ ပြည့်စုံစေရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများဖြင့် ပညာပေးစာစောင်
များ ၊ သတင်းလွှာများ၊စာအုပ်များနှင့် မြေပုံများကို အခါအားလျော်စွာ ပြုစုရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ၊သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်
(ဃ) ပထဝီဝင်စာကြည့်တိုက်တစ်တိုက်ကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
( င )့ အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောအခြားလုပ်ငန်းရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ကမ္ဘာပြဿ နာများနှင့် ပထဝီဝင်ပညာ၏ အခန်းကဏ္ဍ
မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာပြဿ နာများကို စူးစမ်းလေ့လာရာ၌ ပထဝီဝင်ပညာရပ်(Geography) သည် ဗဟိုချက်မတွင်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ( Centrality of Geography & its Study to Many Contemporary Issues)....
ကမ္ဘာ့ပြဿ နာများကိုစူးစမ်းလေ့လာရာ၌ လွယ်ကူစွာနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ပထဝီဝင်ပညာရပ်က လူသားတို့အား ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုကူ ညီနိုင်တယ်ဆိုတာ စာရင်းပြုစုကြည့်လျင် ကုန်ဆုံးနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ဥပမာ -
- မီးတောင်များ နှင့်မြေငလျင်များလှုပ်ရှားမှုများမှသည် ရေလွှာလျောစီးခြင်း၊ရေလှိုင်းစီးခြင်းနှင့် ရေစီးသန်သောမြစ်ချောင်းများအတွင်းလှေဖေါင်စီးခြင်း အထိ၊
- ရေရယူလိုမှုကိုအကြောင်းပြု ၍ ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများမှသည် အကောင်းဆုံးအရက်သေစာကို ဘယ်မှာရနိုင်သည်အထိ၊
- ကမ္ဘာ့တေးဂီတမှသည် ရေခဲနှင်းလျောစီးဖို့ ဘယ်နေရာကိုရွေးချယ်ရမလည်းအထိ၊
- ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှသည် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းအထိ၊
- နေရာပြောင်းရွေှ့နေထိုင်ခြင်း( Migration)မှသည် ဂီတသုခုမပညာအထိ၊
- ရေခဲမြစ်နှင့် ရေခဲလွင်ပြင်များအရည်ပျော်ခြင်းမှသည် သင်၏ပန်ကန်ပြားထဲရှိ အစားအစာများအထိ၊
- ကင်ညာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများသည် မာရသွန်တာဝေးပြိုင်ပွဲများတွင် အဘယ်ကြောင့်မကြာခဏအောင်ပွဲခံနေရသနည်းမှသည် နယ်စပ်ဒေသများကို
ဖြတ်ကျော်သူများသည်အဘယ့်ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုးမှုအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရတာလဲအထိ၊
- နေအိမ်တစ်လုံးကို တည်ဆောက်သည့်လုပ်ငန်းမှသည် တစ်ဖက်ရန်သူနေရာယူထားသော တောင်ကုန်းကိုတက်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်မည့် နည်းဗျူဟာ
ပြဿ နာမျိုးစုံ ၊ နယ်ပယ်မျိုးစုံတို့တွင်ပထဝီဝင်ပညာကကောင်းစွာအထောက်အကူပြု နိုင်ပါသည်။ ပထဝီဝင်ပညာရှင်များတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ပြဿ နာများအတွက် အဖြေအားလုံးရှိကောင်းမှ ရှိပေမည်။ သို့သော်အထက်ဖေါ်ပြပါ ပြဿ နာများကို လက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အရေးပါ အရာရောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုမူ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအားလုံး လူမှု-စီးပွားဘဝများ၏ အခြေခံရာနေရာအတော်များများတွင် ပထဝီဝင်ပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် အသိသညာများသည် လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေသည်။ ဥပမာ -
- ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ခြင်း၊
- ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေပေးဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီခြင်း၊
- လောင်စာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ကို ဝေမျှသုံးစွဲခြင်း
- ရေရှည်တည်တံ့မည့် ဖွံ့ဖြိုးမှု ( Sustainable Development) နှင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး၊အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးမှု (Green Economy & Green Growth)
စသည့် လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာတို့တွင် ပထဝီဝင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသိသညာများ ၊အခြေခံသဘောတရားများ ၊ဗဟုသုတများ ၊အတွေ့အကြုံများ ၊ ကျွမ်း
ကျင်မှုများ ၊သဘောထားအမြင်များသည်လည်းကောင်း ၊ ပထဝီဝင်ပညာ၏ အစွမ်းထက်သောလက်နက် ကိရိယာများဖြစ်ကြသည့် မြေပုံများ ၊ သရုပ်
ပြပုံများ ၊စာရင်းကားချပ်များ ၊ ကောင်းကင်(လေယာဉ်)ဓါတ်ပုံများ ၊ ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများနှင့် အဝေးမှအာရုံခံနည်းပညာ ( Remote Sensing Techno-
logy - RS) ၊ ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်နည်းပညာ ( Geographic Information Systems -GIS [or] Geo - Spatial Technology) တို့
သည်လည်းကောင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ထိရောက်တွင်ကျယ်စွာ အကျို ပြုလျက်ရှိပါသည်။
ပထဝီဝင်ပညာကိုလေ့လာဆည်းပူးခြင်းမှ ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ပထဝီဝင်ပညာကိုလေ့လာဆည်းပူးခြင်းမှ ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အမြောက်အမြားရှိသည့်အနက် အဓိကအကျိုးကျေးဇူး (၃) ရပ်ကိုသာ ယခုတင်ပြပါမည်။
၁။ မေတ္တာပေါင်းကူးတံတား (Bridge Function)
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသမျှသော ပညာရပ်အားလုံးအနက် ပထဝီဝင်ပညာသည်သဘာဝသိပ္ပံဘာသာရပ်များ(Natural Sciences ) နှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ် များ ( Social Sciences) ကို သဟဇာတဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်သော တစ်ခုတည်းသောပညာရပ် ဖြစ်ပါသည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော ပထဝီဝင်ပညာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်နှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို မေတ္တာပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် သမူဟကျအောင် ပေါင်းစည်း ပေးနိုင်သော စွမ်းရည်များကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ရေး ( Good Citizen)
ပထဝီဝင်ပညာကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မှန်ကန်သောအသိတရားနှင့် မှန်ကန်သောတွေးခေါ်စီမံလုပ်ဆောင်မှု များကို ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားကောင်း၊နိုင်ငံသမီးကောင်းများဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။နိုင်ငံချစ်စိတ် ၊တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်၊ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် များကို ထာဝရခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်သီချင်းတွင်ပါဝင်သော ဒါ...တို့ပြေ (ပြည်) ၊ ဒါ...တို့မြေ ၊ တို့...ပိုင်တဲ့မြေ ဆိုတာ တို့ရဲ့  ပထဝီဝင် (ဝါ) မြန်မာ့ပထဝီဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အခြေနေအရပ်ရပ်ကိုသိရှိနားလည်စေရေး (International Studies)
ပထဝီဝင်ပညာကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျ ဉ်း၍ မှန်ကန်သော သဘောထားဖြင့်တရားမျှတသောဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များကိုကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက္ခဏာဆောင်မှုဖြစ်စဉ် (Globalization Process) က်ို သိမြင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာရေးရာဆိုတာ ကမ္ဘာပထဝီဝင် ပါပဲ။ " Think Global , Act Local " ဆိုတဲ့အတိုင်း " ခေတ်မီမီ ကမ္ဘာကြည့် ကြည့် မြင်နိုင်စွမ်း " ရှိအောင်နှင့် မြန်မာ့ပထဝီဝင်နှင့်လိုက်လျော်ညီထွေစွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ပထဝီဝင်ပညာရပ်ကထိရောက်စွာအကျိုးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အခါအခွင့်ကြုံ ခိုက်မို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိကျောင်းသင်ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်သင်ကြားရေးအခြေအနေကိုအကျ ဉ်းမျှတင်ပြလိုပါသည်။အခြေခံကျောင်း များတွင်နဝမတန်း(ကိုးတန်း)သို့ရောက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းသည်ဓါတုဗေဒ၊ရူပဗေဒ၊ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲနှင့်ဓါတုဗေဒ၊ရူပဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ ဘာသာတွဲနှစ်ခုအနက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ပါသည်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက မူလစပြီးရွေးခွင့်ပြုထားတာဘာသာတွဲ(၈)တွဲတောင် ရှိသည်ဟုဆိုထားပါသည်။သို့သော်လက်တွေ့တွင်အထက်ဖေါ်ပြပါဘာသာတွဲနှစ်တွဲပဲရပါသည်။ပထဝီဝင်၊သမိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာစသည့် ဝိဇ္ဇာဘာသာများ၊ယင်းတို့နှင့်တွဲသောဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပေးသောကျောင်းဟူ၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်လက်ချိုးရေတွက်လို့ရအောင်ပင် ရှားပါးသွားပါခဲ့ပါသည်။ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမှာလွန်ခဲ့သောသက္ကရာဇ်၂ဝဝဝခန့်ကတည်းကစလာခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပင်ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ရလဒ်အားဖြင့် ပထဝီဝင်အသိအမြင်ကြွယ်ဝသူဦးရေတစ်စထက်တစ်စလျော့နည်းကျဆင်းလာနိုင်ပါသည်။တစ်နည်းအားဖြင့် ပထဝီဝင်ပညာလစ်လျူ ရှုမှု (Geographic Ignorance) ၊ပထဝီဝင်ပညာမတက်မြောက်မှု (Geographic Illiteracy) ဟူသောအန္တရာယ်နှင့် ကြုံ တွေ့နိုင်ပါသည်။သို့ဖြစ်ရာ ပထဝီဝင်ပညာရပ်ကိုယခင်ကကဲ့သို့ပင် အခြေခံပညာအထက်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိ ပင်မဘာသာရပ်တစ်ခု (A Core Subject) အနေဖြင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး သင်ကြားပို့ချပေးသင့်ပါသည်။
လူချွန်လူကောင်းသီချင်းတွင်" ကမ္ဘာမြေ၊ပထဝီဝင်၊ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ရာဇဝင်၊သုံးသပ်လေ့လာသင်၊အကြံဥာဏ်ဝေဖန်မျှော်လို့ပင်၊ငါတို့ပြည်ထောင်စုတွင်"...ဟု ပါရှိသည့်အတိုင်းနေရာကိုဇောင်းပေးလေ့လာသောသမိုင်းဘာသာတို့သည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာန်ိုင်ငံအတွက်လွန်စွာအရေးကြီးသောဘာသာရပ် များဖြစ်ကြပါသည်။သတင်းတစ်ခုစီ/အဖြစ်အပျက်တစ်ခုစီတွင် နေရာနှင့် အချိန်သည်အမြဲတမ်းပါဝင်နေုပါသည်။နေရာသည်ပထဝီဝင်ဖြစ်ပြီးအချိ်န်သည် သမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများသည် ပထဝီဝင်နှင့်သမိုင်းဘာသာရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ခေတ်အမီဆုံးကျမ်းကိုးစာ အုပ်များဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ယင်းဘာသာရပ်များနှင့်ဆက်လျ ဉ်း၍ထူးချွန်ထက်မြက်စွာလေ့လာသုံးသပ်နိုင်သူများ၊ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိသူများ၊အမြှော် အမြင်ကြီးသူများနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သူများကိုဤပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကအစဉ်အမြဲလိုအပ်လျက်ရှိနေမည်သာဖြစ်ပါသည်။
အချူ ပ်အားဖြင့်ဆိုသော်ပထဝီဝင်ဘွဲ့ရများ၊ပညာရှင်များအနေနှင့်"ပညာရပ်သည်ပညာရပ်အတွက်သာဖြစ်သည်"ဟူသောသဘောထားမျုိုးဖြင့်မလေ့လာ သင့်ပါ။လက်ရှိလူသားများနှင့်နောင်အနာဂတ်လူသားမျိုးနွယ်များ၏စား၊ဝတ်၊နေ၊ရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုအတွက်ပထဝီဝင်ပညာကိုအသုံးချရေး၊အများ အကျိုးပြုရေးအတွက်သာဦးစားပေးပြီးစူးစမ်းလေ့လာဖော်ပြသင့်ပါသည်။"ပညာရပ်သည်လူသားများအတွက်သာဖြစ်သည်"ဟုနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်လုပ်ကိုင်ကြရပါမည်။မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာခပ်သိမ်းကိုပထဝီဝင်မျက်စ်ိဖြင့်ကြည့်ရှုပါမှပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာမြင်နိုင်မယ်။ပထဝီဝင်နားဖြင့်နားထောင်ပါမှပိုမို သဲကွဲစွာကြားသိနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထဝီဝင်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှုဖြင့်သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှသာယထာဘူတဖြစ်သော၊ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော၊အစွန်းနှစ် ပါးလွတ်သော၊တရားမျှ တသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတော်တည့်မှန်ကန်စွာချမှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
"မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းနှင့်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့များမိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပွဲသို့ကြွရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အသီးသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး အားလုံးကို ဝိသေသအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။" မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး၏ နာယကပုဂ္ဂိုလ်များ၊ဆရာကြီးဆရာမကြီးများ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးမှအဖွဲ့ဝင်များ၊အသင်းဝင်များ၊ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၊ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များကိုလည်း များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယနေ့ကျင်းပတဲ့(Press/Media Conference)ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်အောင်အဖက်ဖက်မှကူညီအားဖြည့်ပေး ခဲ့ကြသော၁၉၇၂ခုနှစ်၊ပထဝီဝင်ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်များကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြာလိုပါတယ်။အခြားကျေးဇူတင်ထိုက်သူအားလုံး က်ိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း"မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး၏ကိုယ်စား"အမှတ်တရပြောကြားလိုပါတယ်။
မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီးအနေဖြင့််အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များကိုလည်းကောင်း၊မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်းကြီး၏ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းပါပြဌာန်းချက်များကိုလည်းကောင်းလေးစားစွာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။အသင်းကြီး၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုပေါက်မြောက်အောင်မြင်အောင် ဆော်င်ရွက်ဖွယ်ရှိသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအဝဝကိုလည်း ကကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ကြိုပမ်းဆော်င်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အသင်းသူ/သားများကလည်းဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့်လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးတို့ကို လူအား၊အကြံအား၊ငွေအား၊ပစ္စည်းအားတို့ဖြင့်တတ်စွမ်းသမျှ ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါသည်။အေးချမ်းသာယာပြီးခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရာတွင် "မြန်မာ့ပထဝီဝင်အသင်း"ကလည်းအခြားသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနည်းတူတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးနက်စွာကတိပြုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
Prof. Maung Maung AYE
Rector-in-Charge (Retd.), Yangon University of Distance Education, Yangon, Myanmar
[Ex. Professor/Head, Department of Geography & Dean, Faculty of Earth Sciences, Dagon University, Yangon, Myanmar]
Member of the Ph.D. Steering Committee in Geography, Y.U., Myanmar since 1995
President, Geographical Association of Myanmar (GAM), Yangon, Myanmar
Patron & Chief Advisor, Myanmar Environment Institute (MEI), Yangon, Myanmar
Vice-Chairman, Environment and Economic Research Institute (EERi), Myanmar
Dean, Myanmar Green Development (MGD), Yangon, Myanmar
Patron, Treasure Land Development Association (TLDA), Yangon, Myanmar
Member, Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS), Yangon, Myanmar
Visiting-Professor & Foreign Research Fellow, The University of Tokyo, Japan (2000)
Member, IGU Commission on Hazard and Risk, International Geographical Union
Member, National Commission of Enquiry on Letpadaungtaung Copper Mining Project
Tel: +95-1-394758 (Residence);
05/29/2020 - 23:15
11/08/2019 - 11:00
10/06/2019 - 13:30
Academic Interview given toaPh.D. candidate from the University of Hong Kong
No.118/A, Theikpan Maungwa Road, 42 Wart, North Dagon Township, Yangon
Ph - 09-420184379